]Akpụkpọ ụkwụ ụmụaka, akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwoke, ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị | Akpụkpọ ụkwụ Fowin
Akpụkpọ ụkwụ ndị nwoke
Ụmụ nwoke Slippers akpụkpọ ụkwụ
Akpụkpọ ụkwụ nkịtị ndị nwoke
Ụmụaka Slippers akpụkpọ ụkwụ
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ụmụaka
Akpụkpọ ụkwụ nkịtị ụmụaka
Ụmụ nwanyị Slippers akpụkpọ ụkwụ
Ụmụ nwanyị akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Ụmụ nwanyị akpụkpọ ụkwụ nkịtị
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shantou Fowin Footwear Ltd.
]FOWIN na-arụ ọrụ nke ọma na-emepụta slippers, akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ nkịtị.
Inye akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ụmụaka kachasị mma, akpụkpọ ụkwụ nwoke& akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị .
]Ndị na-emepụta 10 anyị nwere ike hazie ihe ọ bụla n'ime ihe anyị, ma ọ bụ mepụta ngwaahịa ọhụrụ site na ọkọ dabere na nkọwa gị.
]ISO 9001: ụlọ ọrụ 2000 kwadoro.
]Ọ nwere ahịrị mmepụta abụọ, otu ụlọ ọrụ injection na ahịrị nkwakọ ngwaahịa abụọ.
]Nye ọrụ ahaziri ahazi
]Shantou Fowin Footwear Limited tọrọ ntọala na 2003. Anyị na-ahụ maka ịmepụta slippers na akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ anụ na PU na Eva na PVC soles. Katalọgụ anyị ugbu a na-egosipụta ihe karịrị 120 aghụghọ maka akpụkpọ ụkwụ ndị nwoke, akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị na akpụkpọ ụkwụ ụmụaka. Anyị na-arụ ọrụ a 16,000m2, ISO 9001: 2000-gbaara factory na abụọ mmepụta ahịrị, ihe injection ịkpụzi ogbako na abụọ mbukota ahịrị. Ike anyị kwa ọnwa bụ 150,000 ụzọ abụọ. Ndị na-emepụta 10 anyị nwere ike hazie ihe ọ bụla n'ime ihe anyị, ma ọ bụ mepụta ngwaahịa ọhụrụ site na ọkọ dabere na nkọwa gị.
Anyị nwere ndị ọrụ ndị ahịa nke mejupụtara ndị ọkachamara 20 na-asụ Bekee na Japanese nke ọma ma anyị nwere alaka ụlọ ọrụ na Dubai iji na-edozi iwu sitere na mpaghara Middle East. Oge nnyefe bụ naanị ụbọchị iri na ise. Chọpụta ihe kpatara na ihe karịrị ndị na-azụ ahịa 30 gafee North America, Europe, Middle East na Southeast Asia tụkwasara obi Fowin Footwear. Kpọtụrụ anyị taa.
]Àgwà pụrụ ịdabere na ya
Ụmụ nwanyị ikiri ụkwụ
]N'elu:puNjikọ:puInsole: pvcMwepu: pvcAgba: acha anụnụ anụnụ/brMOQ: 800prsOke oke: # 36-41Ihe ịkwụ ụgwọ: TT/LCỌpụpụ ọdụ ụgbọ mmiri:SHENZHEN/SHANTUOge nzipu: 35daysKpọtụrụ m:fowin@fowin.cn
Ụmụ nwanyị Nkume Slipper
]N'elu:puNjikọ:puInsole:puEbe: tprAgba: acha anụnụ anụnụ/brMOQ: 800prsOke oke: # 36-41Ihe ịkwụ ụgwọ: TT/LCỌpụpụ ọdụ ụgbọ mmiri:SHENZHEN/SHANTUOge nzipu: 35daysKpọtụrụ m:fowin@fowin.cn
Ụmụ nwanyị Background Slipper
]N'elu:puNjikọ:puInsole:puEbe: tprAgba: bl/ ọtọMOQ: 800prsOke oke: # 36-41Ihe ịkwụ ụgwọ: TT/LCỌpụpụ ọdụ ụgbọ mmiri:SHENZHEN/SHANTUOge nzipu: 35daysKpọtụrụ m:fowin@fowin.cn
Ụmụ nwanyị Sporty Slipper
]N'elu:puNjikọ:puInsole:puOghere: pvcAgba: tan/slMOQ: 800prsOke oke: # 36-41Ihe ịkwụ ụgwọ: TT/LCỌpụpụ ọdụ ụgbọ mmiri:SHENZHEN/SHANTUOge nzipu: 35daysKpọtụrụ m:fowin@fowin.cn
]Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shantou Fowin Footwear Ltd.
]Tọrọ ntọala na 2003, bụ a Enterprise ọkachamara na Nchikota nke na-emepe emepe, n'ichepụta na ire ere. FOWIN na-arụ ọrụ nke ọma na-emepụta slippers, akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ nkịtị. Inye akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ndị nwoke, akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị& akpụkpọ ụkwụ ụmụaka .
Na àgwà dị ka nke mbụ, afọ ojuju ndị ahịa bụ ihe mgbaru ọsọ nke FOWIN nọgidere na-achụso, ebe ntụkwasị obi na nkwado ha bụ mkpali na-eme Fowin ọganihu. Chọta nhọrọ kachasị ọhụrụ nke akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị omenala, akpụkpọ ụkwụ ndị nwoke& akpụkpọ ụkwụ ụmụaka na akpụkpọ ụkwụ fowin .
]Kedu ihe na-eme ndị ahịa anyị
ndị ahịa nwere obi ụtọ?
Foto ndị ahịa ihe ngosi
]Foto ndị ahịa ihe ngosi